Galaxy Tab S6: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Samsung Galaxy Tab S6: Kiniiniga cusub ee dhamaadka sare leh
Shalay waxaa si lama filaan ah loogu dhawaaqay Galaxy Tab S6 wuxuu u socday inuu is muujiyo maanta, 31-ka Luulyo. Ugu dambeyntii way dhacday waana ogaan karnaa kiniin cusub oo heer sare ah oo ka socda Samsung. Nooca Kuuriya ayaa nooga tagaya aalad awood badan, oo tayo leh iyo waliba qaab xoogaa dib loo cusbooneysiiyay, laakiin taasi waxay haysaa walxaha caadiga ah ee kiniiniyada ku qoran buugooda. Suuragal ah kiniinka ugufiican Android maanta.
Toddobaadyadan waxaa jiray Dheecaan hore ugu filan kaniiniga, taas oo fikrad naga siisay iyada. Waan arki karnaa in badan oo iyaga ka mid ah inay saxsanaayeen, sidaas darteed horay ayaan u haysannay fikrad quruxsan oo qallafsan oo ku saabsan Galaxy Tab S6. Moodal shaki la'aan xiiso u yeelan doona adeegsadayaasha aadka u baahan.
Shaashaddu way ka ballaaran tahay oo waxay leedahay looxyo khafiif ah, marka hore kiniinka si wanaagsan ayaa loo istcimaalaa Intaa waxaa sii dheer, sida horeyba loo soo sheegay toddobaadkan, waxay leedahay dareeraha faraha isku dhafan shaashadda hoosteeda. Marka waa cunsur xiiso u leh arimahan, oo dad badani jecel yihiin.
1 Tilmaamaha Galaxy Tab S6
Tilmaamaha Galaxy Tab S6
Qaar badan baa hore u arkay tan Galaxy Tab S6 oo ah kiniinka ugu awoodda badan Android iyo tayada ugu sareysa. Waa tusaale shaki la’aan u taagan inuu bixiyo waxqabad wanaagsan. In kasta oo aysan layaab ahayn, maxaa yeelay sumadda Kuuriya ayaa nooga tagtay processor aad u xoog badan, guddi tayo leh iyo kamarad gadaal laba-gees ah oo goobtan ku jirta. Faahfaahinta shaki la’aan muhiim ah. Kuwaani waa qeexitaanka buuxa ee kaniiniga:
Muuqaal: 10,5-inji Super AMOLED oo leh xallinta WQXGA (1.600 x 2.560 pixels) iyo 287 dpi
Kaydinta gudaha: 125/256 GB (oo lagu ballaarin karo kaararka microSD)
Kaamirada gadaal: 13 + 5 MP oo leh fur f / 2.2 iyo f / 2.0
Kaamirada hore: 8 MP aperture f / 2.0
Batariga: 7.040 mAh
Nidaamka qalliinka: Android 9 Pie oo leh hal UI
Isku xirnaanta: LTE, WiFi, USB-C, GPS
Kuwa kale: Dareenka faraha ee shaashadda hoostiisa, kuwa ku hadla AKG, S-Pen
Cabirrada: 159,5 x 244,5 x 5,7mm
Miisaan: 420 garaam
Samsung horey ayey u soo bandhigtay dareeraha faraha ka hooseeya shaashadda taleefannadooda, sidaan ku aragnay dhammaadkiisa sanadkan. Nooca Kuuriya ayaa sidan oo kale ku sameeya Galaxy Tab S6. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay Snapdragon 855 oo ah processor, kan ugu awooda badan suuqa, inkasta oo ay kuxirantahay suuqa way ku kala duwanaan kartaa sidaan ognahay, si Exynos loogu isticmaali lahaa meelaha qaar. Laakiin faahfaahin dheeri ah lagama bixin arrintan.
Kaamirooyinka ayaa ah mid ka mid ah awoodaha ay leedahay. Waxay nooga tagayaan kamarad gadaal laba-laab ah oo ah 13 + 5 MP iyo hore 8 xildhibaan. Sidan oo kale, waxay noqoneysaa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan xagga sawir qaadista, taas oo noo oggolaan doonta inaan sawirro fiican ka qaadno dhammaan noocyada xaaladaha. Batariga kiiskan wuxuu leeyahay awood dhan 7.040 Mah, oo siisa ismaamul wanaagsan Galaxy Tab S6.
Sida caadiga ah ee kala duwan, waxaan fursad u leenahay inaan ku qalabeysano kumbuyuutar, oo loo isticmaalo kiniinka sida haddii uu yahay desktop. Muuqaal shaki la'aan xiise u leh dad badan, oo doonaya inay kiniinka ugu adeegsadaan daraasado iyo shaqo. Intaa waxaa dheer, mahadsanid S-Pen waxay noqon doontaa suurtogal in qoraal gacmeed lagu qaato barnaamijka loogu talagalay kiniinka. Waxaa lagu xaqiijiyey shirkadda Samsung lafteeda bandhiggeeda rasmiga ah.
Waqtigan xaadirka ah ma jiraan faahfaahin badan oo ku saabsan soosaarida kiniinka suuqa. Samsung ayaa taas xaqiijisay Waxay noqon doontaa dhammaadka bisha Ogos marka la iibinayo dukaamada internetka iyo jirka. In kasta oo shirkaddu ay xustay suuqyo la xushay, laakiin waa in loo maleynayaa in Spain ay awood u yeelan doonto inay wax iibsato si caadi ah, maadaama ay ka mid tahay suuqyadeeda ugu muhiimsan
Waxaa lagu iibin doonaa buluug iyo cawl, waxba kama ogin goorta midabka casaanka ah ee aan ku aragnay Galaxy Tab S6 uu imaan doono. Ma jiraan wax faahfaahin ah oo ku saabsan qiimaha ay yeelan doonto. ilaa hada. Waxaan kaliya ognahay inay jiri doonaan laba nooc oo kala ah: 6/128 GB iyo 8/256 GB, marka lagu daro laba nooc oo ku saleysan LTE iyo WiFi. Waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan faahfaahin ka helno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy Tab S6: Kiniiniga cusub ee dhamaadka sare leh
Vivo Z5 waxay si rasmi ah ula shaqeysaa Snapdragon 712, kamarad seddexleey ah iyo wax ka badan
Redmi waxay ku isticmaali doontaa Helio G90 mid kamid ah taleefannadeeda